I-testosterone cypionate eluhlaza: kufuneka ukwazi nge-steroids! | AASraw
/Blog/Trenbolone , I-Trenbolone Acetate/I-Testosterone cypionate powder eluhlaza: Yonke into enifanele ukwazi ngayo nge-steroids emangalisayo !!!
ezaposwa ngomhla 02 / 15 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Trenbolone, I-Trenbolone Acetate.
I-testosterone cypionate powder eluhlaza: Yonke into enifanele ukwazi ngayo nge-steroids emangalisayo!
1.Yintoni i-testosterone cypionate? / Isicatshulwa se-Testosterone 2.History ye Testosterone Cypionate
3.Yintoni i-Testosterone cypionate powder eluhlaza? I-4.Iziphi iifom ezenza i-Testosterone cypionate powder ingene?
5.Usebenza njani i-Testosterone cypionate? Izibonelelo ze-6.Iziphumo zeTestosterone Cypionate
7.Ndimele ndisebenzise njani iTesttosterone Cypionate? I-Testosterone Acetate kufuneka ndiyijoze? 8.Testosterone I-Cypionate dose ye-EDTestosterone I-Cypionate dose ye-ED
9.Testosterone I-Cypionate dose yokwakha umzimba 10.Fem
E Testosterone Cypionate Isisombululo
I-11.Iyiphi indlela yokwenza izilwanyana zeTesttosterone Cypionate kwi Testosterone Cypionate powder eluhlaza?
I-Testosterone Cypionate i-powder powder video
|.Testosterone Cypionate Abalinganiswa basisiseko:
igama: Testosterone Cypionate
I-molecular Formula: C27H40O3
Isisindo somzimba: 412.6
Isitoreji sokugcina: 2-8ºC
umbala: I-White okanye i-White Crystal Powder
Yintoni i Testosterone cypionate/ Testosterone cypionate
I-Testosterone Cypionate yenye yeendlela ezininzi ezibonakalayo zeTestosterone ezikhoyo, ngokuqhelekileyo abanxibe impahla kwaye unyango lwe-ED, abanye bathanda Testosterone acetate,Testosterone decanoate, I-Testosterone enanthate, Testosterone phenylpropionate, i-Testosterone isocaproate,Testosterone propionate,testosterone Sustanon 250, zonke ziyinxalenye yeentlobo zeTestosterone.
I-Testosterone Cypionate inokwenzeka ukuba yinto yesibini eyaziwayo eyaziwayo Testosterone Enanthate). Yiyo ifomu ejoyiweyo I-Testosterone enezinga elincinci lokukhululwa kunye nobomi obude. Nangona kunjalo, amazinga okukhululwa kunye nesiqingatha-sobomi bobabili i-Testosterone Cypionate kunye ne-Testosterone Enanthate zifana kakhulu kwaye ezi zimbini ziguquguqukayo (umzekelo, umntu angakwazi ukuqhuba umjikelezo weTestosterone ngeveki ye-10 kwaye atshintshe phakathi kwe-Testosterone Enanthate kunye ne-Testosterone Cypionate kuthungwa). I-Testosterone Cypionate inomdla wesiqingatha-ntsuku malunga neentsuku ze-12 ngelixa i-Testosterone Inanthate inomdla ubuncinane malunga neentsuku ze-10 - kungehluko omkhulu. Inyaniso enomdla malunga neTestosterone Cypionate, nangona kunjalo, kubonakala ngathi iyakuthandwa ngokukhethekileyo phakathi Amalungu omzimba waseMerika kunye nabadlali phezu kohlobo lwe-Enanthate. Oku kwahlukileyo akukona okweqile, nangona kunjalo, kunye nokusetyenziswa kobuchule kunye nokufumaneka kwezi zimiko zibini zilingana no-Testosterone Enanthate zisoloko zithandwa kakhulu. Akukho nantlukwano inayo nayiphi na inzuzo ngaphezu komnye.
Imbali ye Testosterone Cypionate
I-Testosterone Cypionate yaqala ukudala phakathi kwe-1950s, kwaye yakhululwa kwimakethi yezilwanyana zonyango phantsi kwegama lophawu lweDepo-Testosterone kwaye lenziwe ngu-UpJohn (nangona kunjalo, igama layo lophawu lobumba ekuqaleni lalibizwa ngokuba nguDepo-Testosterone cyclopentylpropionate kodwa lancinciwe ngokucacileyo izizathu). Ngokungafani ne-Testosterone Enanthate, eyaziwa ngokubanzi njengento yamazwe ngamazwe, i-Testosterone Cypionate yaziwa ngokuba yimpendulo yase-US kwi-variantate enanthate (nangona i-Testosterone Enanthate isetyenziswa phantse ngokulinganayo e-US). I-Testosterone Cypionate iye yabamba irekhodi elihle elinokuthi liyilo okwenziweyo kwimveliso ngu-Upjohn (odibene nePfizer kwi-2009) namhlanje. Njengoko iTesttosterone Cypionate yayiyimpendulo yaseMelika kwi-International Testosterone Enanthate, abaninzi abantu baseMelika nabakhi beemidlalo kunye nabadlali be-1960, i-70, kunye ne-80 bakhetha ukusetyenziswa kweTestosterone Cypionate ngenxa yokuhluka kwe-Enanthate ngaphandle kwesizathu ngaphandle kokuxhaswa kwemveliso yaseMelika, ngokukodwa kumbango wokuzikhukhumeza (kwakhona kwakhona, ii-Cypionate kunye ne-Enanthate ezahlukahlukeneyo zeTestosterone zizonke zi-100% zifana kwaye akukho sizathu esivakalayo sokhetho olulodwa ngaphezu kwesinye).
I-Testosterone yiyona i-androgen ephambili efunyenwe emzimbeni. I-testosterone endogenous isakhiwe ngamaseli kwi-testis, i-ovary, kunye ne-correx ye-adrenal. Uthando, i-testosterone isetyenziselwa ukulawulwa kwe-hypogonadism, nokuba yintsana okanye ifumaneke. I-Testosterone nayo i-androgen engapheliyo yonyango yokunyanzeliswa kwe-carcinoma yesifuba kubasetyhini be-postmenopausal. I-Testosterone yayisetyenziswa kwi-1938 kwaye ivunyiwe yi-FDA kwi-1939. I-Anabolic steroids, iziphumo ze-testosterone, zisetyenzisiwe ngokungekho mthethweni kwaye ngoku zilawulwa izinto. testosterone, njengabaninzi anabolic steroids, yahlulwa njengezinto ezilawulwayo kwi-1991. I-Testosterone ilawulwa ngama-parenterally ngamafomu e-frequency-release (exempot). NgoSeptemba 1995, i-FDA iqale yamkela i-testosterone i-patroermal patches (Androderm); Zininzi iifom ze-transdermal kunye neemveliso ezikhoyo ngoku zibandakanya iziplantshi, iigel kunye nezisombululo. Inkqubo ye-testosterone buccal, Isigxina, i-FDA ivunyiwe ngoJulayi 2003; le nkqubo ngumkhiqizo ongenamakhono obambelela kwi-buccal mucosa kwaye unikezela ukukhululwa kwe-testosterone. Ngomhla we-Meyi 2014, i-FDA ivume i-intranasal formulation formulation (Natesto). I-patch transdermal (Intrinsa) ye-hormone yokutshintshwa kwabasetyhini iphantsi kophando; Imilinganiselo yemihla ngemihla esetyenziswe kwabasetyhini iyancinci kakhulu kuneemveliso ezisetyenziselwa amadoda. I-FDA ibusa ngasekupheleni kwe2004 ukuba iya kulibazisa ukuvunyelwa kwepatch ye-testosterone ye-Intrinsa yabesifazane kwaye ifuna iinkcukacha ezininzi malunga nokukhusela, ngokukodwa ngokubhekiselele kwimpilo ye-cardiovascular and breast.
Yintoni i-Testosterone cypionate powder eluhlaza?
I-testosterone cypionate eluhlaza, i-raw material ye-Testosterone cypionate, uhlobo oluthile lweMhlophe okanye olumhlophe lwe-Crystal Powder, olungenasiphelo okanye eliphantse kwaye lizinzile emoyeni. Ayikho into engenawo amanzi, i-solylle e-alcohol, i-chloroform, i-dioxane, i-ether, kwaye i-soluble kwi-oyile yemifuno.
Iinkcukacha ze-Testosterone cypionate powder eluhlaza njengezantsi:
I-Formula ye-Molecular: C27H40O3
I-Melt Point: 98 - 104ºC
Isitampu Sokugcina: 2-8ºC
Umbala: Umhlophe okanye ucime iPowstal Powder
Ziziphi iifom ezenza i-Testosterone cypionate powder eluhlaza?
I-Testosterone Cypionate i-powder eluhlaza isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengeoli ejoyiweyo, ibuye ithengiswe ngendlela yokujola. Kwimarike, kukho i-200mg / ml, i-250mg / ml, i-300mg / ml, i-UGL ethile yenze i-350mg / ml kunye ne-400mg / ml.
I-Testosterone cypionate isebenza njani?
I-testosterone cypionate yi-Testosterone, iklasi yeyeza ezibizwa nge-androgens (ihomoni zamadoda). La mayeza asetyenziselwa ukuthatha indawo ye-testosterone kumadoda aneemeko ezibangelwa amanqanaba aphantsi e-testosterone, njenge-erectile dysfunction (kunzima ukufumana okanye ukugcina ukulungiswa). Kukho ezinye izizathu ezinokubangela ukungasebenzi kwe-erectile, ngoko i-testosterone isetyenziselwa ukuphathwa kakubi kwe-erectile ebangelwa yi-testosterone ephantsi.
I-testosterone cypionate isebenza ngokufaka endaweni ye testosterone ukuba umzimba ulahlekile. I-testosterone cypionate ifanele isetyenziswe kuphela ukuba ukusilela kwe-testosterone kuye kwaqinisekiswa yimpawu kunye nokuhlolwa kwegazi.
I-testosterone endogenous inexanduva lokuhluthwa ngokwesini kuzo zonke izigaba zophuhliso kulo lonke ubomi. Ngokweqhinga, lilungiselelwe kwi-cholesterol. Umsebenzi we-androgens ekuphuhlisweni komntu uqala emntwaneni, kubaluleke kakhulu ngexesha lokukhulelwa, kwaye uyaqhubeka nokudlala indima ebalulekileyo kumntu omdala. Abasetyhini banako ukuthumela amanani amancinci e-testosterone kuma-ovari. Ukukhutshwa kwe-androgens kwi-correnx ye-adrenal ayikwazi ukugcina isini ngesini.
Ukukhula kwe-androjeni ye-plasma ikhupha i-horonone (ukunciphisa i-testosterone eqhubekayo), i-hormone ye-luteinizing, ne-follic-stimulating hormone nge-feedback-feedback mechanism. I-Testosterone ichaphazela nokubunjwa kwe-erythropoietin, ukulinganisela kwe-calcium kunye negazi le-glucose. I-Androgens ine-solidility ephezulu ye-lipid, eyenza ukuba bangene ngokukhawuleza iiseli zezicubu ezijoliswe kuzo. Ngaphakathi kweeseli, i-testosterone iguqulelwa kwi-5-alpha-dihydrotestosterone kwaye ivelise i-complex-boundly complex with cytolic receptors. I-Androgen isenzo esivela ekuqaliseni ukutshintshwa kwezinto kunye nokutshintshwa kwamaselula kwi-nucleus evezwe yi-steroid-receptor complex.
Ngokuqhelekileyo, i-androgens engapheliyo ivuselela i-RNA polymerase, ekhokelela ekuveliseni iprotheni yokuvelisa. Ezi iiprotheni zinoxanduva lokuphuhliswa kwesondo ngokuqhelekileyo, kuquka ukukhula kunye nokukhula komzimba weprotate, i-vesicle vesicle, i-penis ne-scrotum. Ngethuba lokuphelelwa komntwana, i-androgens ibangela ukwanda ngokukhawuleza kokukhula kunye nokuphuhliswa kwemisipha, ngokuphindaphinda kwamanqatha omzimba. Utshintsho luyenzeka kwakhona kwi-larynx kunye neentambo zezwi, ukwandisa ilizwi. Ubushushu bugqityiwe ngokuphuhlisa intshevu nokukhula kweenwele zomzimba. Ukuxuba kwe-epiphyses kunye nokupheliswa kokukhula kulawulwa yi-androgens, njengokuba kugcinwa kwe-spermatogenesis. Xa i-androgens engapheliyo ayifumaneki, ukusebenzisa i-androgens engapheliyo kuyimfuneko ekukhuleni komntu kunye nophuhliso oluqhelekileyo.
I-Testosterone ilawulwa nge-intramuscularly (IM), kwesikhumba njenge-gel yenkcazo, isisombululo, i-ointment okanye iinkqubo ezitshintshelweyo zokutyunjwa kwe-transdermal, ngokufakela iipeliti ezenzileyo, okanye ngeendlela ze-buccal.
I-Testosterone ilawulwa nge-intramuscularly (IM); nge-injection yangaphakathi; elukhumbeni njengegrikhi ye-topical, isisombululo, amafutha okanye ama-transdermal systems zokutshintshwa kwe-transdermal; ngokufakela ama-pellets asebenza ixesha elide, okanye; ngeendlela ze-buccal.
Kwi-serum, i-testosterone iboshwe kwiiprotheni. Unobumbano obunzulu be-hormone ebopha i-globulin (SHBG) kunye nobudlelwane obuphantsi be-albumin. I-albin-bound bound-part boundates. Ukuthandana kwe-SHBG kutshintsha ubomi. Kuphakamileyo ngexesha lophambi kwexesha elide, liyancipha ngexesha lokuselula kunye nobomi bomdala, emva koko luvuka kwakhona ekuguga. I-metabolite esebenzayo i-DHT inokubambisana okukhulu kwe-SHBG kune-testosterone. Ukugqitywa kwesigamu-ubomi ngumzuzu we-10-100 kwaye kuxhomekeke kwisixa se testosterone yamahhala kwiplasma.
I-Testosterone isetyenziswe ngokubanzi kwisibindi kwi-17-keto steroids. I-substrate ye-cytochrome ye-hepatic P450 (CYP) 3A4 isoenzyme.1 Estradiol kunye ne-dihydrotestosterone (DHT) yiyona mandla ephawulekayo ye-metabolites, kwaye i-DHT iqhubela phambili imetabolism. Umsebenzi weTesttosterone ubonakala uxhomekeke ekubunjweni kwe-DHT, ebopha kwiiprotheni ze-cytosol receptor. Ukuqhubeka komthamo we-DHT kwenzeka kwiimveliso zokuzala. Ngokumalunga ne-90% ye-testosterone dose isisitriti ixubile kumchamo njengama-conjuguates of glucuronic and sulfuric acid. Ngokumalunga ne-6% ikhutshwe kwizilwanyana, ngokukodwa ingabonakali. Kukho ukuhlukahluka kwinqanaba lobomi be testosterone njengoko kuchazwe kwincwadi, ukusuka kwi-10 ukuya kwi-100 imizuzu.2
I-cytochrome ye-P450 isoenzymes kunye nabathungisi beziyobisi: CYP3A4, P-gp.
I-Testosterone yi-substrate ye-CYP3A4 kwaye ikwabini ihamba kunye ne-inhibitor ye-P-glycoprotein (P-gp) zothutho.
Iintlobo ezingenokwenzeka zeTestosterone Cypionate
Injongo ye-Testosterone Cypionate injections kukunceda ukulawula amanqanaba e-hormone yesintu ekuncedeni ukujongana neengxaki ezinxulumene ne-T ephantsi. Amadoda aphantsi kwe-T okanye i-Testosterone Cypionate body building, inzuzo ye-Testosterone Cypionate injections ingaquka:
iimpawu eziphuculweyo ze-ED
Gcina amandla omzimba kunye nomgangatho
Gcina ubukhulu beethambo kunye namandla
Gcina i-libido kunye nokulungiswa
Ukuvuselela nokuphucula impilo yakho
Ndingayisebenzisa njani i-Testosterone Cypionate?
I-Testosterone Cypionate doses iguquguquka ngokubhekiselele kwiinjongo zomsebenzisi. Iingqinisiso ze-Testosterone Cypionate zingafaniswa naluphina umgomo wokukhahlela, ukukruthwa, ukujikeleza kweesistim. Utshintsho phakathi kwamayeza e-Testosterone Cypionate ngokuxhomekeke kwisinjongo somsebenzisi. Ngokomzekelo, iindawo zokwakha umzimba zonyango zifunwa ngokubanzi ukuba umntu ofuna ukukhulula okanye ukongeza isisindo esifutshane. Ngenjongo yokusika kunye nokulahlekelwa kwetyebileyo, ngokuqhelekileyo akuyiyo imfuneko ukuba iqhube phezulu kakhulu kwizandi zenzalo ngenxa yokuba ixhalaba eliphambili xa libandakanya ukulahlekelwa yintlungu kukulondolozwa ubunzima be-muscle ngexesha lokulahleka kwe-caloric apho ilahleko umngcipheko ngaphandle kokusebenzisa i-anabolic steroids. Kwimeko enjalo, ama-doses aphantsi aqhelekileyo konke okufunekayo.
I-Testosterone Cypionate dose ye-ED
Kwimihlaba yonyango, izikhokelo zemigomo ye-Testosterone Cypionate i-doses ngenjongo yokuntula komntu omdala kunye ne-androgen (u-hypogonadism kunye nendawo ethile) izimisele ukuba yi-50-400mg elawulwayo emva kweeyure ze-2 - 4. Umthamo othile uza kuhlala uxhomekeke kumntu ngamnye kumbuzo,
Amathamo e-Testosterone Cypionate afaka i-Testosterone Replacement Therpay (TRT). Oku kuyimfuneko kwiimjikelezo apho umntu enqwenela ukubeka enye i-anabolic steroid nge Testosterone Cypionate kwaye ukuba le-anabolic steroid ibe neempembelelo zokukhula kwemisipha ngelixa i-Testosterone Cypionate ithatha inxaxheba ekuxhaseni ukugcinwa kwamanqanaba omzimba weTestosterone. I dose ye-100mg ngeveki nganye ye-Testosterone Cypionate ithathwa njengezaneleyo ze-TRT dose. Nawuphi na ophakamileyo kwaye umsebenzisi uqala ukubeka umngcipheko wokunyuselwa kwexabiso lokunyuka kwamanani ukusuka kwi-supraphysiological Testosterone Cypionate.
I-Testosterone Cypionate dose abanxibe impahla
Isiseko seNtsebenzo yeSettosterone Cypionate:
Ngenjongo yokuphucula ukusebenza, isiseko se-Testosterone Cypionate bodybuilding doses siwela kwi-400-500mg ngeveki. Enyanisweni, kuba amadoda amaninzi oku baya kulufuna nokuba ngaba bekhona usebenzisa i-anabolic steroids iminyaka. I-Testosterone Cypionate doses of this range ixhaswe kakhulu ngabantu abadala abadala kwaye baya kusebenza ngokuqhubekayo emva komjikelezo. Ukuba awuzange uqhube umjikelezo ngaphambili, yilapho uza kufuna ukuqala njengoko kuya kukunceda ukuba ubone isigqibo sakho jikelele.
I-Testosterone ephezulu yeCycleate Doses:
I-Testosterone ephezulu ye-Cypionate ye-bodypiece i-doses ngaphezu kwe-level level ukusebenza komsebenzi ayiqhelekanga. Uya kufumana amadoda amaninzi ancedisa nge600-1,000mg ngeveki. Amadoda amaninzi aya kufumana uhla lwe-600mg ukuba lube nexinzelelo, kodwa njengoko umthamo ukhuphuka ngaphaya kweli nqanaba amathuba okuba nemiphumo eqala ukunyuka kakhulu. Xa i-Testosterone Cypionate iisazi zigqithise i-1,000mg ngeveki ukuphawula oku kuya kukwandisa kakhulu amathuba. Ngomyinge oqhelekileyo we-gym rat, i-Testosterone Cypionate yakhe imilinganiselo ayisoze ifune ukushiya i-400-600mg ngeveki. Kwabo baphila ubomi obunzima kakhulu, njengowomzimba womncintiswano okanye umntu ohlala nje ephila, loo mayeza aza kufinyelela kumazinga aphezulu. Amanyathelo anjalo angaphathwa ngokukhuselekileyo kodwa kuya kuthatha umzamo ophezulu kunye nokusetyenziswa okufundisiweyo; lumkiso lukwacetyiswa.
Ukwakhiwa kwesakhiwo seTestosterone I-cypionate isebenze ixesha elide, i-single ester testosterone. Ibude bee-carbons ze-8, kwaye igcinwa kakhulu kwiisitifiketi ze-adipose xa ijojowe nge-intra-muscularly. Kancinci kwaye ngokukhawuleza ikhishwe emzimbeni emva kokuba ijojowe. Amanqanaba egazi we-cypionate i-24-48 iiyure emva kwejoza kwaye iyancipha. Amanqanaba egazi afinyelela kwinqanaba le-12 emva kweeyunithi zokuqala kwaye uhlale apho kwiiveki ezintathu. I-Cypionate ijojowe rhoqo ngeveki, eyenza i-dose ephantsi kakhulu kunesiqingatha se-dose ephambili kwinani na ixesha. Nayiphi na i-testosterone, njengenkosi yabakhi bezakhiwo, ixabiso lemveliso efanelekileyo kwaye ibalulekile kunoma yiyiphi ipaki ye-steroid. Isetyenzisiwe yodwa, umsebenzisi unokulindela ukubona okunye okuzuzayo. Ubume obude obusebenzayo be-cypionate buvumela umsebenzisi ukuba ajobe kangangoko rhoqo ngelixa egcina amanqanaba egazi azinzileyo. I-estoterone ester elide eliza kusebenza liya kuba luncedo kakhulu kwiimfuno zakho zokubhukuda, kwaye i-cypionate ngumkhiqizo olula ngakumbi kunezinye i-steroids ngaphandle apho. Akunakuthetha ukuba akukho sabelo salo senkxalabo, kodwa kukhethwe ngokukhethekileyo, ngakumbi kulabo abatsha ukuphucula umzimba. Ukuyeka umkhiqizo akukhethwa kwimeko apho kwenzeka iziphumo zecala, ngenxa yokuba iya kuqhubela phambili ukuphucula iziphumo zecala ngaphezu kwexesha elide elide ngenxa yobude bezenzo zeli steroid. Izidakamizwa ezinjengalezi nolvadex, proviron, clomid kwaye i-HCG inokunceda, zombini ngexesha lomjikelo kunye nomjikelezo weposi ukuze kuncede ukubuyisela ukuveliswa kwemveliso ye-testosterone. I-testosterone cypionate yenza i-aromatize encinci kune-sustanon, kodwa xa usebenzisa isicatshulwa, umntu kufuneka aqhelane nama-anti-estrogens afana ne-nolvadex okanye i-clomid kwaye asebenzise enye yazo xa iimpawu ze-gyno zenzeka.
I-Testosterone yeCypionate Isisombululo
Ukusetyenziswa kweTestosterone Cypionate phakathi kwabasebenzisi be-female anabolic steroid akuqhelekanga ngenxa yokuba le ngqungquthela eqinile kunye ne-androgenic, kwaye iimpawu ze-virilization ziphezulu zenzeke kwaye zihlala zibonakalisa ngokukhawuleza. I-Testosterone Cypionate, ngoko, ayikhuthazwa ukusetyenziswa kwabasetyhini kwaye kukho idatha encinane kakhulu malunga neendlela zokusebenzisa i-dosing ne-compound.
Yintoni endifanele ndiyazi ngaphambi kokuthatha iTytosterone Cypionate?
Awuvunyelwe ukusebenzisa iTestosterone Cypionate ukuba:
Unobungozi be testosterone okanye nayiphi na enye inxalenye ye-testosterone cypionate injection.
unobungozi kuye naziphi na izilwanyana ezifana nale, nayiphina imithi, ukutya, okanye ezinye izinto. Tshela ugqirha wakho malunga neengxaki zokugula kunye nezinto ozenzayo, njengokugqithisa; mihlathi; ukubetha; ukuqhawukelwa ngumphefumlo; ukujikeleza; ukukhwehlela; ukuvuvukala kobuso, imilomo, ulwimi, okanye umqala; okanye nayiphina impawu.
ungowesilisa kwaye unomdlavuza wesifuba okanye isifo sesisu.
Unayo nayiphi na le ngxaki zempilo: Isifo senhliziyo, isifo sesifo okanye isifo sesibindi.
ungumfazi. Eli liyeza alunconywa ukusetyenziswa kwabasetyhini.
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lwezinto zonke oza kuzibona malunga ne-Testosterone Cypionate.
Yintoni endimele ndiyazi xa ndithatha iTesttosterone Cypionate powder eluhlaza?
Kukho amayeza, okulula ukusebenzisana nawo, nceda ungasebenzisi le mveliso ngelixa uthatha i-Testosterone Cypionate powder eluhlaza:
amayeza esifo sikashukela
-imida ephathwayo okanye yokuthintela igazi njenge-warfarin
-amachiza afana ne-prednisone okanye i-cortisone
Yintoni endimele ndiyazi emva kokuthatha iTytosterone Cypionate?
Gcina le mayeza kwi-68 ° F ukuya kwi-77 ° F (20 ° C ukuya ku-25 ° C) kwaye kude nokushisa, ukunyuka nokukhanya.
Gcina onke amayeza ngaphandle kokufikelela kwabantwana.
Ukulahla nayiphi na iyeza elingasetyenziswa emva komhla wokuphela.
Musa ukutshiza amayeza angasetshenziswanga okanye ugalele i-diski okanye i-drain.
Musa ukwabelana nalo mayeza kunye nabani na.
Ukuthengisa okanye ukunika eli liyeza kuyingozi kunye nomthetho.
I-Testosterone Cypionate Cycles kunye ne-Uses
Yintoni endimele ndenze xa ndilahlekelwa umthamo?
Sebenzisa i dose ephosakeleyo ngokukhawuleza xa ucinga ngako.
Ukuba kusondele ixesha elilodwa lomthamo wakho ozayo, weqa umthamo olahlekileyo uze ubuye kwixesha lakho eliqhelekileyo.
Ungasebenzisi izilwanyana ze-2 okanye amayeza angaphezulu.
Njengokuba kukho nawuphi na uhlobo oluthile lwe-Testosterone okanye i-derivative, imijikelezo ye-Testosterone Cypionate isoloko isetyenziswe ngokusisigxina ngenjongo yokubhikisha, ukuzuza ubuninzi, kunye namandla okufumana ixesha loqeqesho. Nangona usebenziso olufanelekileyo ngolu hlobo, oku akuthethi ukuba ayikwazi ukusetyenziswa ngokufanelekileyo (nangona isilinganiselo esezantsi) ukusika imizila apho ukulahlekelwa yintlawulo yinjongo ephambili. Ngenjongo yokubhikisha kunye / okanye ukufumana ubunzima kunye namandla, i-Testosterone Cypionate idla ngokuqeshwe kwisilinganiso esiphezulu (malunga ne-500mg / iveki). Kuqhelekileyo kusetyenziswe kule mlingo kwithuba leeveki ze-12 - 14 ngenxa ye-ester yayo ende, kwaye ngoko-ke i-half-life life. I-Testosterone Cypionate inesigamu-ubomi se-10 - ii-12 iintsuku. Ngokuthelekiswa, umlingani wakhe osondeleyo we-Testosterone Enanthate ulingana, kunye nobomi obunemizuzu engama-7 - 10 iintsuku.
Kungakhathaliseki ukuba umjikelo wentshukumo, ingaba ukusika okanye ukubetha, i-Testosterone Cypionate isetyenziselwa kunye kunye kunye nezinye i-anabolic steroids ezinempawu ezifanayo ezifana nezizathu ezicacileyo. Iqabane eliqhelekileyo kwiinkampani ezinjengeDeca-Durabolin (i-Nandrolone Decanoate), ngokuqhelekileyo iqhutyelwa kwi-10 - 12 ubude beveki njenge-Testosterone Cypionate, kunye ne-'startstarting 'njenge-Dianabol (iMetandrostenolone) ngokuqhelekileyo ifakwe kwi ukuqala komjikelezo kude kubeke ukuphela kweveki ye4 okanye i-6.
Ziziphi ezinye iziyobisi ezingasebenzisana nalo myeza?
Kukho ukusebenzisana phakathi kwe-testosterone cypionate kunye naluphi na oku kulandelayo:
hormone ye-adrenocorticotropic (ACTH)
i-corticosteroids (umzekelo, i-hydrocortisone, i-prednisone, i-methylprednisolone)
isifo sikashukela (umzekelo, i-chlorpropamide, i-glipizide, i-glyburide, i-insulin, i-metformin, i-nateglinide, i-rosiglitazone)
Ukuba uthatha nawaphi na amayeza, kungcono ungathathi iTesttosterone Cypionate, okanye uthethe nodokotela wakho okanye ukhemistri ukuba utshintshe umthamo weziyobisi.
Amanyango ngaphandle kwalawo abhalwe apha ngasentla angasebenzisana nalo mayeza. Tshela ugqirha wakho okanye umyalelo malunga nayo yonke imirhumo, ngaphezu kwe-counter (non-prescription), kunye nemithi yemithi oyithathayo. Batsho nabo malunga naziphi na izongezo ozithathayo. Ekubeni i-caffeine, utywala, i-nicotine esuka kwi-cigarettes, okanye iziyobisi zeprato zingathintela ukuthathwa kwamanyango amaninzi, kufuneka uvumele umyalelo wakho ukuba wazi ukuba uyisebenzisa.
Iimpembelelo eziPhezulu ze-Testosterone Cypionate
Njengemodemoni ebekezeleke kakuhle kakhulu kubantu abaninzi, imiphumo emibi ye Testosterone Cypionate ilula ngeendlela ezininzi ukulawula. Xa kuziwa kwiimpembelelo ezinjalo, gcinani engqondweni zabo ziwela kwiindawo ezinokwenzeka kwaye aziqinisekanga. Nangona kunjalo, i-dosing iyonke, iziganeko zokuzaliswa kwemvelo kunye neemeko zakho zempilo ziya kudlala indima.
Ngokubhekiselele kwimiphumo yecala, i-Testosterone Cypionate njengazo zonke izixhobo ze-testosterone zinezinga eliphezulu lomsebenzi we-aromatase; i-aromatization ebhekisela ekuguquleni kwe-testosterone kwi-estrogen. Njengoko amazinga e-estrogen ephakanyiswa, oku kunokukhokelela kwi-gynecomastia (ukukhuliswa kwesisu) kunye nokugcinwa kwamanzi okungaphezulu. Ukugcinwa kwamanzi okungaphezulu kunokuchaphazela kakubi ukucinezelwa kwegazi. Ukulungiselela ukulwa nemiphumo enje, ngokukodwa i-gynecomastia, abaninzi baye kwi-Modelators ye-Selective Estrogen Receptors (i-SERMs) njenge-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) kunye nokukhuselwa ngakumbi kwe-Aromatase Inhibitors (AI) njenge-Anastrozole (Arimidex). Ngaphandle kokungabaza, ii-AI zona zinempumelelo kakhulu; Nangona kunjalo, banokubonisa ukuba yingxaki xa kuziwa kwi-cholesterol kunye nokulumkisa.
Ngaphandle kwezi mpawu, i-Testosterone Cypionate inokukhuthaza i-dihydrotestosterone (DHT) nemiphumo echaphazelekayo efana ne-acne, ukulahleka kweenwele kunye ne-prostate yokwandisa; nangona kunjalo, kufanelekile ngaphandle kokuthi i-DHT steroids iya kuba yinto ephambili. Ukulungiselela ukukhusela, i-5-alpha reductase inhibitor efana ne-Finasteride inokunceda njengoko i-androgen iphineli kwaye i-androgen DHT ibangela ingxaki. Kufuneka kuqatshelwe; Ukulahleka kweenwele kuyenzeka kuphela kumadoda athatyathwa kwindoda yesimo somntu.
Indlela yokwenza izilwanyana zeTesttosterone Cypionate kwi Testosterone Cypionate powder eluhlaza?
Nazi iindlela zokulula zokukwenza i-Testosterone Cypionate (ukubhekisela)
I-mL nganye ye-200 mg / mL isisombululo iqulethe:
Ioli yekholethi ............................................................................................. 560 mg
Kuyiwaphi ukuthenga ubungcwele obuphezulu beTesttosterone Cypionate powder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Testosterone Cypionate ipowder eluhlaza yinkomfa edlalwa ngokuthe ngqo kwihlabathi le-anabolic steroid, kwaye ihlala iqhathanisa neTestosterone Enanthate ukuba ithandwa. Akufuneki kubekho iingxaki ekufumaneni le mveliso kwimarike, njengoko iqhelekileyo kwaye iveliswa ngokulula.
I-Testosterone Cypionate ingathengwa kwimithombo ye-intanethi, amaxabiso angatshintsha.Kwimarike, ukuhlanjululwa kwe-Testosterone Cypionate i-powder eluhlaza ihluke ngokupheleleyo, ngokuqhelekileyo ivela kwi-60% -99% puirty, kwakhona kukho i-grade ye-pharmaceutical grade one, kodwa ngokuqhelekileyo imilinganiselo yekhwalithi engcono xabiso eliphezulu, kubangele ukuba lenze iimveliso ezininzi.
tags: bathenge i-Testosterone cypionate powder, Testosterone cypionate powder
I-Testosterone propionate powder: izibonelelo kunye nemiphumo emibi omele uyiqonde!
I-sex hormore tadalafil powder: Iifayili ze-12 malunga nesondo sokuphucula isilwanyana ofuna ukuba wazi !!! i-tadalafil enobumba obuhlaza ekwenzeni unyango lwe-erectile (ED)